Gba ọgwụ mgbochi ịtụte njem mba ọzọ
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Gba ọgwụ mgbochi ịtụte njem mba ọzọ
Israel, United States na UK, ebe mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi na-aga nke ọma, ahụla ndenye akwụkwọ ụgbọ elu na-arị elu karịa steepụ
Mba ndị na-ekwe nkwa doro anya iji nabata ndị njem na-agba ọgwụ mgbochi na-akwụghachi ụgwọ site na nnukwu mmụba na ntinye akwụkwọ ụgbọ elu
Gris, na Iceland ekwuputala na ha ga-anabata ndị ọbịa na-agba ọgwụ mgbochi n'oge okpomọkụ a ahụla akwụkwọ ntinye ụgbọ elu na-ebuli elu n'ụzọ dị egwu
Njikọ dị n'etiti ọnụego ọgwụ mgbochi na njem na-apụ apụ siri ike
Dika nyocha nke ulo oru ohuru nke data ntinye akwukwo agha kacha nso a, ogwu ogwu na adi ka igodo iji weghachite njem ndi ozo.
Ebe abụọ, Gris, na Iceland, bụ ndị kwupụtara na ha ga-anabata ndị ọbịa ọgwụ mgbochi a n'oge ọkọchị a ahụla ndenye akwụkwọ ụgbọ elu na-ebuli n'ụzọ dị egwu site na oge ọkwa ha.
Atọ ahịa atọ, Israel, ndị US na UK, ebe mkpọsa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na-aga nke ọma, ahụla mbupụ akwụkwọ ndozi na-arị elu karịa steepụ karịa ebe ndị ọzọ.
Gris, onye akụ na ụba ya dabere na njem, emeela ka a mara ọkwa njikere ịnabata ndị ọbịa a gbara ọgwụ mgbochi, gafere ule COVID-19 ma ọ bụ gbakee site na ọrịa ahụ.
E nyeghachila ọkwá ahụ n'ọkwá ụgbọ elu site na isi ahịa ndị dị mkpa dị ka US na UK. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị n'elu ndepụta ebe ndị kachasị ewu ewu maka ndị njem Britain n'oge okpomọkụ a; nke mere na tiketi ndị akwadoro maka njem n'etiti July na Septemba bụ ugbu a 12% n'ihu ebe ha nọ na oge kwekọrọ na 2019.
Ọzọkwa, nyocha nke ebe kachasị sie ike na Europe n'oge ọkọchị a na-ekpughe na asaa n'ime obodo iri kachasị bụ Grik, yana agwaetiti Mykonos na-eduga ndepụta ahụ, ebe ntinye akwụkwọ n'oge ọkọchị na-eguzo ugbu a na 54.9% nke ihe ha nọ n'otu oge, tupu -ọgbaghara.
Ọ na-esote agwaetiti Spanish, Ibiza, ebe ntinye akwụkwọ dị na 49.2%. Ebe asatọ ọzọ na-esote nkwụghachi bụ Chania (GR) 48.9%, Thira (GR) 48.1%, Kerkyra (GR) 47.5%, Thessaloniki (GR) 43.7%, Palma de Mallorca (ES) 41.2%, Heraklion (GR) 36.6%, Athens (GR) 33.2% na Faro (PT) 32.8%.